zesimanje ezenza yenzelwe ukusiza abesifazane. Okusanda uvele Amatebhe multivarka «Polaris» ezimakethe, okuyinto ngokushesha yazuza ukunakwa emhlabeni wonke futhi kwaziswa kakhulu. Abakhiqizi baye kucatshangelwe yonke izidingo abathengi kanye idivayisi elula nakakhulu. Inhlanganisela design nenhle nokulawula ezingabizi bamvumela ukuhlobisa indawo ekhishini.
Isizukulwane esisha onobuhle «Polaris» - high, fast and kulula ukulungiselela. Into ebaluleke kakhulu - izitsha ibhalwe multivarka ukugcina zonke amavithamini futhi ube ukunambitheka omuhle. Ikakhulukazi ke lubaluleke omama abasebasha ngubani obakhathalelayo impilo izingane zabo futhi bafuna ukudla ukuba ewusizo futhi olinganiselayo. Kuyo kusheshe futhi kube lula ukupheka iphalishi kusuka ezihlukahlukene okusanhlamvu, futhi ngaso sonke isikhathi uphume crumbly futhi okumnandi.
Lesi sihloko izotholakala ukuchaza indlela yokwenza unyaluthi iphalishi e multivarka "Polaris". Kungani hambahamba ibuza? Yebo, ngobe lena wokudla amumethe amaprotheni yemifino, inani izikhathi eziningana njengengcebo enkulu kunemicebo umthamo in irayisi, futhi Perlovka nokunye okufana nokolweni. Ngaphezu kwalokhu, unyaluthi kuyasiza ukuqinisa amasosha omzimba futhi sithuthukise ipheshana wokugaya ukudla. Naphezu kokufaneleka, ukunikeza izingane zakhe bengayi phambi iminyaka 1.5 njengoba okwamanje amabele gluten. Kunconywa ukusebenzisa lokuyolula- kusukela umkhuhlane futhi imikhuhlane.
Delicious unyaluthi iphalishi: ubisi iresiphi
Uzodinga: ilitha ubisi, unyaluthi multistakan, ucezu ibhotela, ushukela kanye ingcosana kasawoti.
Croup kufanele ngokuphelele engahashazanga ngaphansi kwamanzi agobhozayo futhi uthele ubisi. Endishini engeza izithako ezisele futhi uvule "isobho" ihora. Lapho isignali kucushwa, khetha Ukushisa futhi ushiye imizuzu engu-40. Futhi, ungakwazi njalo ukhetho uyephuza isiqalo. Ukubeka iphalishi kusihlwa, ngoba ibhulakufesi uzothola dish egcwele futhi elimnandi.
iphalishi Lean nge amabhilikosi omisiwe
Uma unamathela othile Ukudla nokulawula ikhalori eyanele, siphakamisa ukuthi wenze iphalishi iphilile esihlwabusayo. Sebenzisa kuphela ehlungiwe noma ibilisiwe amanzi ukuze okusanhlamvu waphenduka soft futhi emnene. Lean unyaluthi iphalishi e multivarka "Polaris" ngeke ukulimaza sibalo futhi bayakujabulela. Ngisho ukudla nawe ungadla kuyasiza hhayi kuphela kodwa futhi okumnandi.
Izingxenye: multistakan Pshenko, izibuko ezinhlanu amanzi ahlanzekile, amabhilikosi omisiwe ukunambitha.
Millet uthele endishini ekhethekile, amboze ngamanzi bese engeza amabhilikosi omisiwe. Ungakhetha noma yiliphi izithelo ezomisiwe, uma uthanda. Khona-ke uvule umsebenzi "Ilayisi" for isigamu sehora, amboze ngesivalo. I isiqedile isidlo fafaza nati.
Dessert nge ithanga
Izithako: ithanga (ezingamakhulu amahlanu amagremu), amabele multistakan, ubisi (izinkomishi ezinhlanu), ibhotela (spoon) ushukela.
Sula ithanga kusukela ikhasi, uthathe tincetu encane, ubhapathizelani endishini ne bhotela wembatha "Baking" Imodi. Pheka nge lid evulekile, umkhiqizo kuphekeke. Ngo inqubo ukupheka ithanga kufanele zixutshwe, kwenze ngokulinganayo propeklas.
Ngemuva kwemizuzu engu-20, engeza imifino unyaluthi, ushukela futhi uthele ubisi - ukunika amandla inketho "Ubisi iphalishi". Ngosizo isethi timer setha isikhathi - isigamu sehora. Ngenxa yalokho, uzoba elimnandi, crumbly futhi kamnandi amabele iphalishi. Ngo multivarka "Polaris" ukupheka Kuyinjabulo isidingo sokuthi sibe namakhono oluvelele Culinary.
Millet iphalishi nge inyama: iresiphi multivarka
Izithako: amagremu engamakhulu amathathu inkukhu, ezimbili multistakana unyaluthi ezine izinkomishi zamanzi (ukuhlanzwa), u-anyanisi, izaqathe, garlic, bhotela (locezu), emnyama nosawoti.
Beka ibhotela phansi isitsha kuso - umucu lisikiwe. Isendlalelo elilandelayo iyoqedwa anyanisi, garlic kanye izaqathe ogayiwe. groats Bahlanza isidlo ephelele, unezela isinongo izinongo namanzi. Veza ukhetho "pilaf", uhlanganise futhi unakekele ibhizinisi ubuchwepheshe akusho wazise mayelana nokutholakala.
Iphalishi kanye nemifino
Ukwakheka: ezimbili isitshalo seqanda, izaqathe ezimbili, onion, amabele (eziyikhulu amagremu), amanzi kanye ibhotela (50 grams). Seasonings kunezelwa ngokuzikhethela ngesisekelo esikuthandayo.
ibhali Bahlanza ukubeka esitsheni akhethekile, sigcwale amanzi. Kukhona futhi engeza isitshalo seqanda, uthathe cubes kanye ibhotela. Pheka phezu umsebenzi "Ubisi iphalishi". Lapho ukudla usulungile, kubalulekile ukwenza, engeza izaqathe yashizi kanye anyanisi - uvale lid futhi uvule "Ukushisa" for isigamu sehora.
Millet iphalishi e multivarka "Polaris" - esihlwabusayo, egcwele amavithamini futhi baqiniseka ngokugcwele ephephile ukudla impilo. Kulesi emangalisayo yedivayisi lokuqala isizukulwane kokwenza izibiliboco: yenkukhu, inyama, inhlanzi, amasobho, casseroles ngisho amabhisikidi eziyinkimbinkimbi. Futhi believe me - uyojabulela inqubo ukupheka, okuyinto akudingi eziningi imizamo kanye nokuqapha okuqhubekayo. Kwanele ukubeka imikhiqizo esitsheni bese usetha mode oyifunayo - zonke, ukhululekile. Ubuchwepheshe bubodwa izocima futhi iyoba nawe ngakho. Manje uyazi ukuthi ukupheka unyaluthi iphalishi nge izithako ezahlukene. Buka impilo yakho futhi ngidla ngendlela efanele.
IA Bunin. Izindaba (isifinyezo): alley amnyama okuholela elula
Medicine "Ksefokam" (imijovo): yokusetshenziswa, izimpawu, contraindications